Goobaha bukaan socodka oo dhaqaatiir la'aan ka jirto - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Goobaha bukaan socodka oo dhaqaatiir la'aan ka jirto
La daabacay tisdag 12 januari 2016 kl 11.08
"Waa in dhaqaalaha loo kordhiyo bukaan socodka"
More doctors are needed at Sweden's local health clinics, a new report finds. Photo: Claudio Bresciani / TT.
Dhaqaartiirta ka howl-gasha hosbitaalada waa weyn ee Sweden ayaa ka badan marka loo barbardhigo waddamada deriska ah.
Laakiin saas oo ay tahay waxaa yar tirada dhaqaatiirta ah ee ka howl-gasha xaruumaha bokaan socodka (primärvården). Sidaas waxaa muujinaya baaritaan lagu eegayo sida ugu waanagsan ee loo isticmaalo hantida loogu talo daryeelka dadweynaha.
Mid ka mid ah dadka dareemay culeyska ka jira xaruumaha bokaan socodka waa Saskia Bengtsson, oo ah dhaqtar guud oo ka howl-gala degmada Jönköping.
– Dhibaatada koobad ee la soo gudboonaata dhaqaatiirteena ka howl-gasha goobaha bokaan socodka waa waqtiga aan bukaanka siino oo aad u yar. Waqtiga nooma saamaxo in aan shaqada u qabano sida ugu wanaagsan ee doonayno., ayuu teri Saskia Bentsson.
Todbaadkan ayaa la soorayaa baarint lagu sameeyey sida loo adeegsada dhaqaalaha lagu baxiyo daryeelka caafimaadka iyadoo natiijada baaritaanka loo gacangelinayo xukumadda. Baaritaanka ayaa soo jeedinaya talooyin badan oo lagu hagaajin karo waxqabadka xaruumaha caafimaadka , gaar ahaan in dhaqaalaha loo kordhiyo xaruumaha bokaan socodka.
Inkastoo dhaqaartiir la’aan aysan Sweden ka jirin waxay dhibaato weyn dhanka dhaqaatiirta ka heysataa xauumaha bokaan socodka oo ay ugu waccan tahay dhaqaalaha la geliyo goobahan oo aad u yar taas oo sababta gabaabsi dhanka dhaqaatiirta, sida uu sheegay baare Göran Stiernstedt:
– si kasto oo ay ku suurogeli karto waa in hantida loo kordhiyaa xaruumaha bukaan socodka, waana in si ka weyn sida maanta tahay layskugu xiro xaruumaha bukaan socodka iyo hosbitaalada waaweyn, ayuu yeri.